“ ခြင်ဆေးခွေ မလို ! အင်မတန် အစွမ်းထက်တဲ့ ခြင် မလာအောင် ကာကွယ်တဲ့ အိမ်တွင်း ဆေးနည်း”
28/06/2019 Yan Naing 0
“ ခြင်ဆေးခွေ မလို ! အင်မတန် အစွမ်းထက်တဲ့ ခြင် မလာအောင် ကာကွယ်တဲ့ အိမ်တွင်း ဆေးနည်း” မင်္ဂလာပါ ခြင်မလာအောင် ခြင်ကာကွယ်တဲ့ ဆေးနည်းလေး ပေးပါမယ် စ ပါး လင် အရွက် လေး ညှင်း ပွင့် သံ ပု Continuous reading
28/06/2019 Thu Yay 0
မိဘကိုချစ်ရင် မရှက်ပါနဲ့ ******************** အလယ်တန်း အထက်တန်း ကျောင်းသူဘဝတုန်းက ကျောင်းတက်ရင် အတန်းဖော်သူငယ်ချင်းတွေက မေးကြတယ် ” နင့်အဖေ ဘာလုပ်လဲ နင့်အမေ ဘာလုပ်လဲ ” လို့ မေးရင် ကျွန်မအရမ်းအားငယ်ရတယ် ဝမ်းနည်းမိတယ် ” ငါရဲ့ဖေဖေက စက်ချုပ်တယ် ငါ့ရဲ့မေမေက ထမင်းချက်တယ် ” Continuous reading
ဝ တာ ကျန်း မာ ရေး ရှု ထောင့် က ကောင်း သ လား ( ဒေါက်တာ နိုက်တင်ဂေးလ် ဖြေကြားသည် )
ဝ တာ ကျန်း မာ ရေး ရှု ထောင့် က ကောင်း သ လား ( ဒေါက်တာ နိုက်တင်ဂေးလ် ဖြေကြားသည် ) မေး ဒေါက် တာ မ မ ရှင့် ၊ အ ခု Continuous reading
ငွေကိုတော်တော်စိစစ်ပြီးသုံးနေရတယ်ဆိုတဲ့ ဖိုးလပြည့် ဖိုးလပြည့်ဟာဆိုရင် ငယ်ငယ်ကတည်းက ပရိသတ်တွေရဲ့မျက်စိရှေ့မှာကြီးပြင်းလာခဲ့သူဖြစ်ပြီး အသက်ကြီးလာလို့ အနုပညာလုပ်တော့လည်းပဲ ပရိသတ်အားပေးမှုရရှိခဲ့သူပါ။ ဖိုးလပြည့်က အနုပညာဘက်မှာဝါသနာကြီးပြီး cover song တွေ cover သီချင်းတွေဆိုသလိုအခုဆိုရင် ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာပါ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေပါပြီ။ ဖိုးလပြည့်ဟာ မကြာသေးမီက နေတိုးနဲ့ နေခြည်ဦးပါဝင်တဲ့ အခမ်းနားဆုံးမေတ္တာလို့အမည်ရတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာလည်းပါဝင်သရုပ်ဆောင်ပေးထားပါသေးတယ်။ ရုပ်ချောဥစ္စာပေါ၊အနုပညာကိုခုံမင်ပြီး ချမ်းသာကြွယ်ဝသလို Continuous reading
မူးယစ်တရားခံအား ရုံးထုတ်စဉ် ၎င်း၏ သား ၂ ဦးပါဝင်သော လူတစ်စုက ကျင်စက်သုံးတိုက်ခိုက်ကာ တရားခံလုယူ
မူးယစ်တရားခံအား ရုံးထုတ်စဉ် ၎င်း၏ သား ၂ ဦးပါဝင်သော လူတစ်စုက ကျင်စက်သုံးတိုက်ခိုက်ကာ တရားခံလုယူ ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၂၈ ပုသိမ်မြို့ ခရိုင်တရားရုံးသို့ မူးယစ်တရားခံတစ်ဦးကို ရုံးထုတ်လာစဉ် ၎င်းတရားခံ၏ သား ၂ဦးပါဝင်သော လူတစ်စုက ကျဉ်စက်သုံးးတိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်၍ တရားခံလုယူမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်သည် ဇွန် Continuous reading
ပညာထူးချွန်သူဖြစ်တာကြောင့် အောက်စဖိုဒ့်တက္ကသိုလ်မှ ပါရဂူဒေါက်တာဘွဲ့ရရှိခဲ့တဲ့ ဆရာတော်
ပညာထူးချွန်သူဖြစ်တာကြောင့် အောက်စဖိုဒ့်တက္ကသိုလ်မှ ပါရဂူဒေါက်တာဘွဲ့ရရှိခဲ့တဲ့ ဆရာတော် ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ မြန်မာပြည်မှာ ဖွား၊ မြန်မာပြည်မှာ ကြီးပြင်းပြီး ကမ္ဘာကျော် အောက်စဖိုဒ့်တက္ကသိုလ်မှာ ပါရဂူဒေါက်တာဘွဲ့ရရှိခဲ့တဲ့ ဆရာတော် ဒေါက်တာဓမ္မသာမိ ထရုပ္ပတ္တိ အကျဉ်းကို ဖော်ပြပေးသွားမှာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာတော်ကို (၁၉၆၄)ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ (၂၃)ရက်နေ့မှာ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ လဲချားမြို့၊ နောင်ပန်ရွာမှာ Continuous reading
မိဘတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ ကလေးတွေရဲ့ အမူအယာ (17) ချက်
မိဘတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ ကလေးတွေရဲ့ အမူအယာ (17) ချက် မိဘတွေက ကလေးတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ငယ်ငယ်လေးတည်းက အသေးအဖွဲကစပြီး စိုးရိမ်တတ်ကြပါတယ်။ ကလေးတွေ ဘာဖြစ်ချင်သလဲ၊ ဘာအဆင်မပြေလဲ ဆိုတာကို မိဘတွေက သိချင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်မှာ ကလေး မရှိရင် ဒါတွေ နားမလည်နိုင်ပါဘူး။ မိဘတွေနဲ့ Continuous reading
မိဘတွေအတွက် သာသနာ့ဘောင်ထဲ ခဏ ဝင်သွားပြီးဖြစ်တဲ့ ကောင်းထက်ဇော် မိဘတွေ ကံနိမ့်နေလို့ သာသနာ့ဘောင်ထဲ ခဏ ဝင်မယ်ဆိုတဲ့ ကောင်းထက်ဇော်Channel7ကနေ ထုတ်လွှင့်ပြသတဲ့ မိသားစုပြိုင်ပွဲ ၊ Money Drop (ငွေတွေဝင်) စတဲ့အစီအစဉ်တွေအပြင် အခြားသော အစီအစဉ်များစွာနဲ့ ကြော်ငြာတွေမှာ ပါဝင်သူက ကောင်းကြီး Continuous reading
မသန်ပေမယ့် သန်မာသူတွေထက် စွမ်းနေတဲ့အံ့ဖွယ်လူသားများ လူတိုင်းစိတ်မှာ ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာသန်စွမ်းနေမှ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အောင်မြင်ကို ရတယ်လိုက ထင်ကြပါတယ်။တကယ်တော့ စတိဗင်ဟော့ကင်းတို့လို ခန္ဓာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံးနီးပါးသေသွားပေမယ့် သိပ္ပံပညာရှင် ဖြစ်နေတာရှိပါတယ်။ဒီလို လောကမှာ မသန်ပေမယ့် သန်မာသူတွေထက် စွမ်းနေတဲ့ သူတွေရှိပါတယ်။ သူတို့ကို ဖော်ပြပေးလိုက်တယ်။ 10. Turia Pitt Turia Pitt Continuous reading
Total Hits : 1194230